မလှမပတရုတ်မကိုရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကို မက်ဇူကာဘတ် ပြော - The Lifestyle Myanmar
Homepage / Opinion / မလှမပတရုတ်မကိုရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကို မက်ဇူကာဘတ် ပြော
မလှမပတရုတ်မကိုရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကို မက်ဇူကာဘတ် ပြော
By Hot NewsPosted on July 8, 2020
တော်တော်များများမေးကြတယ်ဗျ။ (သူတို့အပြောအရပေါ့လေ) ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသူဋ္ဌေးကြီးက မလှမပတရုတ်မတစ်ယောက်ကို ဘာအတွက် ယူရတာလဲတဲ့။ ကျနော်ဟာ (သူတို့အမြင်အရပေါ့) ကျနော့်ရဲ့လက်ရှိမိန်းမ ပရက်စီလာချန်ထက် ပိုသာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရနိုင်သလို ရလည်းရသင့်တယ်ပေါ့။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဦးဆုံးအနေနဲ့ လှတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်လို မလှတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်ပုံ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ကျနော့်အနေနဲ့ လှပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများနဲ့ ဆုံဖူးပါတယ်။ အတော်များများကလည်း ကျနော့်ဇနီးမယား ဖြစ်ချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမလှတွေလို့ ပြောလို့ရတဲ့သူတို့တွေရဲ့ စိတ်နှလုံးသားဟာ ဖန်သားပြင်လိုပဲ ကွဲကြေလွယ်တယ်။ မာနကြီးသလောက်ခေါင်းမရှိတဲ့ ဘုရင့်သမီးတော်တစ်ပါးလိုပေါ့ ရှင်ဒီလောက်ချမ်းသာတာ ကားလေးဘာလေးပြောင်းမစီးတော့ဘူးလား မေးနေတော့တာပဲ။ သူတို့ဟာ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ကတော်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေအဆက်မပြတ်လာမှာဖြစ်ပြီး အထက်တန်းလွှာလူ့မလိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝင်ဆံ့ချင်ယုံရည်ရွယ်တယ်။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကို အလကားပေးလည်း ကျနော်မယူချင်ဘူး ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ကျနော်ထင်လို့။
“အသွင်အပြင်အလှက အသက်အပိုင်းအခြားခဏလေးဖြစ်ပြီး အတွင်းသားအလှကတော့ အသက်အရွယ်ရလာလေလေ တန်ဖိုးတက်လာလေလေ” ဆိုတဲ့ တရုတ်ဆိုရိုးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏလေးနဲ့တန်ဖိုးကျသွားမယ့်အရာတွေနဲ့ မနွယ်မိဖို့ရှောင်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ ကျနော့်မိန်းမ ပရက်စီလာချန်ကို ဘာလို့သဘောကျနှစ်ခြိုက်ရလဲ ဆိုတာပါ။
ကျနော် သူ့ရိုးရှင်းမှုနဲ့ အသွင်အပြင်ကို သဘောကျတယ်။ သူ့မှာ စိတ်အားထက်သန်မှု ဉာဏ်ပညာ ရဲရင့်မှု ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွေ ရှိတဲ့အပြင် တခြားသူတွေကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သူရှိနေရင် တခြားအရာတွေပါ ကျနော်တန်ဖိုးထားတတ်လာသလို ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ ခံစားမှုလည်းရစေတယ်လေ။
ပရက်စီလာဟာ ကျနော့်ကိုခုတုံးလုပ် ကြွားလုံးထုတ်မော်ကြွားမယ်လို့ တစ်ခါမှမခံစားမိဘူး။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်မားသလို စိတ်အရည်အသွေးလည်းမြင့်သူပါ။ သူက ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က ဆေးပညာနဲ့ဘွဲ့ရလာသူဆိုတာလည်း လူကြီးမင်းတို့မေ့မထားသင့်ပါဘူး။ လူအတော်အများများ အဓိကယူကြတဲ့ ဆေး ဥပဒေ စီးပွားရေးဘာသာရပ်တွေနဲ့ လူကြီးမင်းဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်အောင်တယ်ဆိုရင်တောင် ထူးထူးချွန်ချွန်ဘွဲ့ရဖို့တော့ မလွယ်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်ရည်သွေးပြပါဆိုရင် ကျနော့်ထက် ပရက်စီယာကပိုတောင်သာနေတယ်မလား။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ဖိနပ်တစ်ရံလိုပါ။ စီးတဲ့သူကလွဲ ဘယ်သူကများ စီးလို့ကောင်းမကောင်း သိဦးမှာလဲ။ သူသာ ကျနော့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး သူသာကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျနော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစံထားရမယ့် ဘက်ညီတဲ့တစ်ခြမ်းပါ။ ပရက်စီလာနဲ့စသိတာ ရေအိမ်အသွား လူအုပ်ကြားမှာပေါ့။ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ကျနော်ဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်တဲ့ ကြောင်စီစီလူတစ်ယောက်ထက် မပိုဘူး။ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့် ကျနော့်နှလုံးသားက ပြောလိုက်တယ် “ဒါ ငါ့ဘဝလက်တွဲဖေါ်” လို့ပေါ့။
လူကြီးမင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ ပရက်စီလာက မလှဘူးပေါ့။ ကျနော့်မျက်ဝန်းထဲတော့ ကျနော်နဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်အညီဆုံး မိန်းမလှတစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပရက်စီလာနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေမှာ သဘာဝကျပြီးအေးချမ်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိူးပေါ်နေတာ ထိန်ချန်ထားလို့ကိုမရပါဘူး။
MY WIFE CHINA AND NOT PRETTY
First of all to answer that question, I want to discuss whatabeautiful woman is?
and what isawoman not beautiful?
Posted in OpinionTagged မက်ဇူကာဘတ်, မလှမပတရုတ်မ
Previous post WHO ကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံ နုတ်ထွက်ဖို့ သမ္မတ ထရန့် တရားဝင် စာတင်ပြီ
Next post မြန်မာလုပ်သားများလွှဲထားသည့် ကျပ်သိန်း ၆၀ လိမ်ယူပြီး တိမ်းရှောင်နေသူကို ဖမ်းမိ